MD Farmaajo oo markii ugu hreysay kahadlay musiibadii maalmo kohor kadhacay muqdisho. ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka MD Farmaajo oo markii ugu hreysay kahadlay musiibadii maalmo kohor kadhacay muqdisho.
MD Farmaajo oo markii ugu hreysay kahadlay musiibadii maalmo kohor kadhacay muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa markii u horeysay ka hadlay qaraxyadii habeenkii khamiista ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho, kaasoo dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu geystay.
Madaxweyne Farmaajo oo xalay kulan la qaatay Howlwadeenada Caafimaadka, hey’adaha ammaanka, kuwa gurmadka degdega, Maamulka Gobolka Banaadir iyo Wasiiro ayaa sheegay in wixii dhacay ay aheyd musiibo, isla markaana muddo 11 sano ay soo socotay
“Xaqiiqdii waa musiibo wixii dhacay, musiibadan waxay soo socotay muddo 11 sano wax hada bilowday ma ahan, wax sanadkii la soo dhaafay bilowday ma ahan, waxa aan la dagaalameyno waa Argagixiso”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Argagixisada ay la dagaalameyso horumarka, dowladnimada kobaca dhaqaalaha iyo nafta bani’aadamka, isagoo xusay in waxa ay raadsanayaan aysan aheyn dowlad kaliya, oo ay beegsanayaan shacabka.
“Ciidanka Keligood wax ma qaban karaan, howshan waa howl wadareed, waa wax noo wada yaalo, hadduu yahay siyaasi, ganacsade iyo culimo, haddaan laga wada shaqeyn amniga dhexda loo xiran oo loo daayo wiilasha dhalinyarada waxay qaban karaan waa wax aad u yar”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Siyaasiyiin iyo ururada bulshada ayaa ku dhaliilay dowladda Federaalka inay ka gaabisay amniga, isla markaana sanado kaddib weerarada Al-Shabaab ay ka dhacayaan halbowlihii Caasimadda iyo goobo aan ka fogeyn Madaxtooyada Soomaaliya.
Previous articleNin dhalinyaro ah oo cadaado ku sameeyay Somali Air Force (S.A.F)
Next articleDowlada Somaaliya oo sheegtay in xiriirka kenya iyo soomaaliya aaney waxba iska badalin.